रविलाई भेटेपछि केपिले भने:सोनिका दिदि पटक्कै गलत हुनुहुन्न (भिडियो) – पुरा पढ्नुहोस्……
रविलाई भेटेपछि केपिले भने:सोनिका दिदि पटक्कै गलत हुनुहुन्न (भिडियो)
छोटो समयमा चर्चा कमाएकी भिजे हुन सोनिका रोकाया । उनको चर्चाको सफलताले खुशि मनाउने जति छन उनको खुट्टा तान्न र उनलाई गलत साबित गर्न मान्छे उति नै तल्लिन पनि छन । खास गरेर हिजोआज च्याउसरि उम्रिएका अनलाईनले आफ्नो समाचार बिकाउन सोनिकाले गर्दै नगरेका विषयमा समेत जोड्दै नराम्रो देखाउन तल्लिन छन ।
जुन कुरा पछिल्ला अनलाईनका समाचार र युट्युबमा आएका कमेन्टहरुले घाम जस्तै छर्लङ्ग पारिदिएको छ । हुनत उनलाई नजिकबाट चिन्ने र बुझ्नेले यो पनि बुझ्नुभएको छ कि सोनिका विन्दास छिन,दर्शकका लागी फरक तरिकाले मनोरञ्जन दिन पुर्ण रुपले लागी परिरहेकी पनि छिन । दुनियाले जे भनेनी सोनिका गलत छैनिन,बरु उनलाई गलत देखाउन पर्दापछाडी सयौ लागीपरीरहेका छन ।
यस्तैमा काठमाडौ सरसफाई अभियानका अभियनता केपि खनालले एक अन्तरवार्तामा आउंदै यो कुराको स्पष्टिकरण समेत दिएका छन । केही दिन अघि मात्र रवि लामीछानेलाई भेटरै अन्तरङ्ग कुरा गरेका केपिले रविसंग जोडेर सोनिकाको नाम बारम्बार आएको दुखेशो समेत व्यक्त गरे । उनले भने
“सोनिका दिदिलाई म नजिकबाट चिन्छु र मलाई यो पनि थाहा छ कि उहाँले रवि लामीछानेलाई एकदमै सम्मान गर्नुहुन्छ । बिनासित्ति एकोहोरो मानसिकता बनाएर केही दर्शकले उहाँलाई गाली गरिरहनुभएको छ । मान्छे हो कहिलेकसो केही गल्ति हुनपनि सक्छ,त्सको लागी त उहाँले यसअघि पनि माफि माग्नुभएकै छ । यत्ति बुझ्नुस सोनिका दिदि मनको सफा हुनुहुन्छ । उहाँले कसैलाई नराम्रो सोचेर केही बोल्नुभएको भने पक्कै छैन “
विवादमा तानिरहने दिल निसानी मगरको अन्तरवार्ता लिएपछि सोनिकालाई केही व्यक्ति र दर्शकले गाली गरेका थिए । उक्त अन्तरवार्तालाई लिएर सोनिकाले स्पष्टिकरण समेत दिईसकेकी छिन ।
“दिल निशानी मगरको अन्तरवार्तामा रवि जि बारे मैलै केही नराम्रो बोलेको छैन ,गल्ति यत्ति भयो दिलको क्रियाकलापमा म हासे । तर त्यो रवि जि लाई लिएर हुदै होईन । यदि दिल निशानीको अन्तरवार्ता लिएर गलत गरे र मेरो प्रस्तुतीले तपाई चोट पुग्यो भने मनैदेखी माफि चाहन्छु । आगामी दिनमा मेरो प्रस्तुतीमा भएका कमजोरीलाइ सुधार्दै लैजानेछु,बरु सल्लाह सुझाव भने दिदै गर्नुहोला ।”
Prevसमृद्धी ल्याउँछौ भनेर जिद्धी गर्ने नेतालाई रवीको झटारोः सगरमाथाको चुचुरो पुगेर झण्डा गाडी सक्नु भो, के अझैं माथि पुग्न झण्डानै चढ्ने ?
Nextमानव तस्करीका आरोपमा राजेन्द्र खड्गी प्रहरी खोरमा, फिल्मी शैलीमा मान्छे बेचेको खुलासा, यसरी बाहिरिदै रहस्य !
सिधाकुरा जनतासंग टीम र पत्रकार रवि लामिछानेको सम्मानमा बन्यो गीत (भिडियो )
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल असोज १८ गते आइतबार इश्वी सन २०२० अक्टोबर ४ तारीख